Iminqweno malunga neentlanzi | Ngeentlanzi
Los intlanzi, Ukongeza ekubeni zezona zilwanyana zifunyenwe kakhulu kuzo zonke iintlobo zabantu, banokuba sesinye sezona zilwanyana zinomdla. Ngaba ngokwenene umdla indlela umama wendalo azenze ngayo ukuba ezi zilwanyana zifumaneke kuthi, ezinokuba nezinto ezinokwenza ukuhleka okungaphezulu kwesinye.
Siza kuvavanya umxholo esiwubonileyo amaxesha ambalwa. Imalunga ne- curiosities malunga neentlanzi, isihloko, ngaphandle kokuba sikhululekile kwaye simnandi, siya kusothusa xa sisazi iintlobo ezithile zolwazi malunga nezi zilwanyana. Ngaba awazi nto malunga nezilwanyana zehlabathi? Ewe, siza kufumanisa ezinye izinto.
Masiqale ngeyokuqala. Ukuba uyazi Intlanzi ekhukhumeleyoSiqinisekile ukuba uyazi ukuba ukuzikhusela bazikhuthaza, bebonisa izixhobo ezahlukeneyo ezibakhuselayo. Sisenzo ngokuqinisekileyo esenza okuhle kubo, kuba ngale ndlela bayaziphepha iintlobo ezininzi zamarhamncwa, nganye inomdla ngakumbi.
Masiqhubeke nayo iintlanzi zezibane. Igama lalo livela "kwibhalbhu yokukhanyisa" enayo, evumela ukuba ibone ukusuka kwiimitha ezingama-30 kude. Yinto eya kuba luncedo kakhulu, kuba ihlala ihlala kubunzulu obuphakathi kwe-700 kunye ne-1.000 yeemitha ubunzulu, imeko apho kumnyama kakhulu.
El iintlanzi ezindizayo Inokuba inomdla kakhulu. Igama layo, njengoko kwenzekile kuhlobo lwangaphambili, ikwavela kolunye lweempawu zalo. Ngokukodwa, enye ikuvumela ukuba utsibe ufike kwiimitha ezintathu ukuphakama. Into ekunceda ngeendlela ezahlukeneyo.
El intlanzi etoli kuyamangalisa. Ubusazi ukuba inokudubula iijetshi zamanzi, kuyo, kumgama ongaphezulu kwemitha enye? Ewe wenza kuphela xa ezingela, ukuze simbone kunqabile. Nangona kunjalo, ayiyeki ukuba yinto enomdla.
Masithathe omnye umzekelo, ochaphazela Ukrebe omhlophe. Olu hlobo lunemiqolo emithathu yamazinyo, kunye nobukhulu obuphakathi kweemitha ezisixhenxe ukuya kwezisithoba. Ngale ndlela, sinokuyifumana njengenye yeentlobo zeentlanzi ezoyikekayo kwaye, kwakhona, yenye yezona zithandwayo.
Njengoko ubona, ubukumkani beentlanzi buba nomdla kakhulu. Ezi datha zezinye zezinto ezikhoyo, njengoko zininzi iintlobo zezilwanyana ezinazo iimpawu. Kungekudala siza kuthetha ngakumbi, zonke zinomdla kakhulu.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Iminqweno yeeFudo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Iintlanzi nazo zinomdla
Inomdla kakhulu kodwa kuya kufuneka ubhale izinto ezinomdla ongaziwa mntu, indawo efihlakeleyo yentlanzi kunye neempawu zayo nayo yonke into enomdla kwihlabathi lasemanzini.